October 25, 2009 at 4:33 pm2comments	ဂျာနယ်ကျော်မမလေး(၁၉၁၇-၁၉၈၂) က မရွှေမိ အနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာမပါ။ ဒီလိုပြောလို့ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ဒီနေ့ အချိန်ထိ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးကို သဘောကျတဲ့ စာဖတ်သူတွေက အများကြီးရှိတာပဲလေ။
သူ့ကို သဘောကျတာက ရေးတဲ့စာတွေကို သဘောကျတာထက် လူကို သဘောကျတယ် ၊စာရေးသူရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ် ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် လို့ ပြောမှ ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသဘောအကျဆုံး စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ပါပဲ။ တခြားစာရေးကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာတွေကို စာတွေကိုကြိုက်ပေမယ့် ဘ၀ကို ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားလှတယ်မရှိမိဘူး။ ဘာလို့ ဒီလိုခွဲပြောလဲ ဆိုတော့ မရွှေမိ အမေနဲ့ ငြင်းခဲ့ ခုံခဲ့ရ တာကို သတိရနေလို့ ပါ ။ ဆယ်တန်းဖြေပြီး အားနေတဲ့အချိန်မှာ စာအုပ်ပုံတွေထဲခေါင်းစိုက်လို့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ စာ တွေ ကို ရှုမ၀ ကနေဖတ်ပြီး သဘောကျ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အမေက ပြောတယ် ခင်နှင်းယု၊ခင်ဆွေဦး တို့ က ပိုပြီး စာရေးကောင်း၊ရေးနိုင်တာ နင်မယုံရင်ယှဉ်ဖတ်ကြည့်တဲ့။ အင်း…ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်။ ခင်နှင်းယုရဲ့ ပန်းပန်လျက်ပါ ဆို လက်ကမချချင်ပဲ စာလုံးလေးတွေကိုစွဲနေတာကိုး။ခင်ဆွေဦးရဲ့ လုံးချင်းတွေဆိုတာလဲ ဖတ်လို့ မ၀အောင်ပဲ။ ဒါကိုတော့ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး က အကောင်းဆုံး လို့ ပဲ ကိုယ်ကလဲမျက်စိမှိတ် ငြင်းတာပဲ။ အဲဒီမှာ အမေက ပြောတယ်။ နင်ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကို သဘောကျတာက ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဖြစ်နေတယ် ဆိုပဲ။ ဟက်ဟက်…ဟုတ်ပါတယ်။ မငြင်းပါဘူးလေ။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရဲ့ သူလိုလူ တို့ ရင်နင့်အောင်မွှေး တို့ …သူမ၊ သွေး…အဲဒီစာအုပ်တွေဖတ်လို့ ဘယ်လိုကောင်းတယ် ဘာညာ ဆိုတာတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီနေ့ အထိကို ပြန်ထုတ်ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ စာအုပ်တွေပဲလေ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖူးသူတိုင်းလဲသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စိတ်ဝင်စားတဲ့မရွှေမိ တစ်ယောက် ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာတွေ၊အခြားစာရေးဆရာ တွေ ဘယ်လို ခြယ်မှုန်းလဲ ၊ဘာတွေရေးကြလဲ ၊ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတာတွေကို မျှဝေချင်လို့ ရေးတာပါ။ ပထမဆုံး ဖတ်ရတာ က ဒဂုန်တာရာရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ မှာပါတဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး သို့မဟုတ် မေတ္တာပန်းပွင့် ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ အဲဒီမှာ တော့ ဒဂုန်တာရာ ရဲ့ အဖွဲ့  အနွဲ့ နဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ စာရေးဆရာဘ၀၊ စာပေအမြင် ၊ အခက်အခဲတွေကြားက မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီး ဂျာနယ်ကျော်ကို ထုတ်ရသလဲဆိုတာတွေ၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အစွဲအလမ်း ကြီးတတ်တာ၊ မေတ္တာစိတ်ထားတတ်တာ စတာတွေကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာ တစ်ဝဖတ်လိုက်ရတယ်။ နဲနဲ တော့ ကျေနပ်သွားပြီ။
နောက် တစ်ခါ တွေ့လာပြန်တာ က သော်တာဆွေက အမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကို ချစ်ခင်စွာနဲ့ သူ့ရဲ့ ၀တ္ထု တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းကျီစားတာကို ဖတ်ရတာပါပဲ။😛
Entry filed under: ဂျာနယ်ကျော်မမလေး. Tags: .	ဘိလပ်ပြန်သန်း ရဲ့  ခင့်စိတ်ကူး	ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၂ )	2 Comments Add your own
Anonymous | October 25, 2009 at 8:01 pm
mashwemi | October 25, 2009 at 10:04 pm
လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကို သဘောကျတဲ့သူအချင်းချင်းဆိုတော့ အကြိုက်တူတာပေါ့နော်။ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ စာအုပ် က အီးဘွတ်ခ် မရှိပါဘူး။ ရိုးရိုးစာအုပ်ပါ။ ရန်ကုန်က စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ လက်ကျန်လေးတွေတော့ ရှိမလားပဲ။ ထွက်တာတော့ကြာပီ။🙂